एक "मास्टर" के हो: शब्द को लेक्सिकल अर्थ
एक "गुरु" के हो: शब्द को लेक्सिकल अर्थ
रूसी मा शब्द "मास्टर" व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, धेरै अर्थहरू छ भनेर जान्नु पर्छ र भाषणमा लेक्सिकल इकाईको सही प्रयोगको लागि प्रतिष्ठित छ। यस लेखमा, हामी "गुरु", समानार्थीहरू र एन्टोन्याक्सहरू शब्दका लागि विचार गर्नेछौं, वाक्यांशको इकाइहरूमा यसको प्रयोग।
यो lexeme सँग धेरै परिभाषाहरू छन्, जुन एक सेमेन्ट्ट कर्नेल द्वारा एकसाथ जोडिएको छ। टी.एफ. को शब्दकोश मा शब्द "मास्टर" को निम्नलिखित अर्थ Efremova मा दिइएको छ:
एक योग्य व्यक्ति जो केहि शिल्प मा संलग्न छ।
एक विशेष उत्पादन कार्यशालाको प्रमुख।
कुनै व्यक्ति जसले कुनै पनि गतिविधिमा उत्कृष्ट परिणाम पाएको छ।
शिल्पकार, जसले आफ्ना सहकर्मीहरूको उच्चतम वर्गसँग सम्बन्धित छ।
एक virtuoso, चालाक मान्छे।
मेसोनिक लजको सदस्य, एक समान पद रहेको, श्रेणी।
खेलकुद उपलब्धिहरु को लागि शीर्षक छ, र एक रेजाल को लागि तोकिएको एक व्यक्ति।
"गुरु" के हो भन्ने कुरा, यो लेक्सिकल इकाईको पुरानो अर्थ संकेत गर्न आवश्यक छ: "एक शिक्षक जो एक पत्र सिकाउँछ, चर्चका पुस्तकहरूमा पढ्छ।"
समानार्थीहरू lexemes सँग समान अर्थ छन्, तर आवाजमा भिन्न हुन्छन्। विश्लेषण शब्दमा, तपाईं निम्नलिखित पर्यायौं एकाइहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
Virtuoso - जो एक निश्चित व्यवसाय मा हासिल गरेको छ;
कलाकार - पेशेवर, कुशलतापूर्वक आफ्नो काम प्रदर्शन गर्दै;
Maestro कुनै पनि प्रकार को एक प्रतिभाशाली "ठूलो" प्रतिनिधि हो, एक शतरंज खेल मा एक मान्य शीर्षक।
एन्टोन्यामहरू शब्दहरू हुन् जुन अर्थ र आवाजमा विपरीत छन्, भाषणको एक भाग हुन। एंटोनमिक इकाई लेक्सेम "अज्ञानमस" हुनेछ। "गुरु" के हो, माथि उल्लेखित छलफल गरिएको थियो, "अनजान" - अजाममस, एक अपरिचित व्यक्ति, जसले केही जान्दैन।
प्रश्नमा लेक्सेमको साथ, निम्न निरंतर वाक्यांशहरू सामना गर्दछन्:
सबै व्यवसायको एक ज्याक एक मानिस हो, कुशलतापूर्वक र व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित। प्रारम्भिक रूपमा, धेरै मानिसहरूले एक काम गरे, यो छ, धेरै हातहरू संलग्न थिए, त्यसैले "सबै व्यापारहरूको ज्याक" एक पेशेवर हो जसले यो एक्लै गर्न सक्छ।
मास्टर को मामला डराउछ - यो अभिव्यक्ति भनेको हो कि यदि एक पेशेवर काम मा संलग्न छ, त्यसपछि यो गुणात्मक र छिटो प्रदर्शन गरिनेछ। कुनै व्यवसाय उनको हातमा जलाइरहेको छ। यहाँ, टोकन "मास्टर" को लागि प्रयोग गरिएको कुशल कारीगर को शब्द को अर्थ हो जुन उनको काम जान्छ।
मास्टर-डिएचर - एक जना व्यक्ति जसले सबै कुरालाई खारेज गर्दछ, जसको लागि उसले केहि सार्थक काम गर्दैन। काम गर्दैन। यस अर्थमा, शब्द "ग्यारह मास्टर" प्रयोग गरिन्छ।
नतिजा स्थिर अभिव्यक्ति प्रायः रूसी क्लासिक्स, बच्चाहरु को लेखकहरुको कामहरुमा भेटिन्छ। उदाहरणका लागि, एस मार्शकसँग एक अद्भुत कविता "मास्टर लोमस्टर" छ, जुन धेरै राम्रो तरिकाले वाक्यांशशास्त्र को अर्थ बुझाउँछ।
यसैले, सही प्रयोगको लागि र प्रश्नमा लेक्सिकल एकाइको प्रयोग गर्न, यो जान्न आवश्यक छ कि "गुरु" कुन शब्द हो, कुन समानार्थीहरू र एन्टिटोन शब्दहरू यस शब्दमा छन्, कुन शब्दको संयोजन यो हुन्छ।
How to say "हेलो" स्पेनिश मा र एक कुराकानी शुरू गर्नुहोस्
ठोस चिन्हको साथ शब्दहरू: इतिहास र लेखको नियम
Klusha को हो? अर्थ, समरूप र उदाहरणहरू
हात पुरातात्विक वा पुरा तरिकाले आधुनिक शब्द हो?
प्रत्यय "उपनाम"। रूसी भाषा
महिला जाँघिया को सबै प्रकार
पैट्रिक डे Funes: जीवनी, परिवार फोटो
को मसूडों मा चिसो sores: सम्भावित कारण, लक्षण र उपचार सुविधा
काँस चलचित्र महोत्सव - एक परी कथा, जहाँ मुख्य भूमिका उहाँको Majesty सिनेमा खेलिएको
उत्सव पोशाक - एक राजकुमारी लागि विकल्प
प्लास्टिकको थलोबाट माछा र हलचलमा बाथरूम
NAS सर्भर के हो र तिनीहरू के लागि के हुन्?
मार्क वारेन: ब्रिटेन देखि प्रेम। जीवनी ब्रिटिश अभिनेता मार्क वारेन
थाईल्याण्ड मा Orchidacea Resort होटल (फुकेत): वर्णन, यात्री समीक्षा
Vodyanova Natalya: वजन, उचाइ, सबै भन्दा लोकप्रिय मोडेल
अलेक्जेन्डर Shiryaev र namesakes